Wararkii ugu dambeeyay dagaal khasaare geystay oo ka dhacay Gaalkacyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaal khasaare geystay oo ka dhacay Gaalkacyo
Wararkii ugu dambeeyay dagaal khasaare geystay oo ka dhacay Gaalkacyo
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Faah-faahin cusub ayaa ka soo baxaya, iska hor-imaad hubeysan oo xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkan ayaa ka dambeeyay markii Ciidanka Puntland ay weerar ku qaadeen rag ka ganacsada qamriga, kuna sugnaa xaafadda Garsoor, kuwaas oo iska caabin kala horyimid ciidanka.
Wararka ayaa sheegaya, in muddo kooban ay si xoog ah xaafadda Garsoor, gaar ahaan agagaarka Hotel Cagaarweyne, uga socotay rasaastii ay labada dhinac is weydaarsanayeen, taasi oo qalqal ku abuurtay dadka deegaanka.
Ciidanka Puntland ayay markii dambe u suurtagashay inay cagta mariyaan goobtii ay ku sugnaayeen raggaasi, kuwaa oo qaarkood gacanta lagu soo dhigay, xabsigana loo taxaabay.
Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen iska horimaadkaas oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka laba kalana ay ku dhaawacmeen, waxaana suurtagal ah in khasaaruhu uu intaa ka bato.
Ilaa iyo hadda wax war ah kama soo saarin saraakiisha Ciidanka Puntland iska horimaadka hubeysan ee ka dhacay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo oo ay ka taliso Puntland.
Si kastaba, iska hor-imaadkan ayaa ku soo aadaya, xilli magaalada Gaalkacyo ay tan iyo dabayaaqadii bishii May ka dhicin falal liddi ku ah amniga magaalada.